၅၀ % တောင် ? Discount ချနေတဲ့ Mr.Wok မီးတောက်ခေါက်ဆွဲ နဲ့ ဘူးသီးတောဓလေ့ထမင်းဆိုင် – FoodiesNavi
၅၀ % တောင် ? Discount ချနေတဲ့ Mr.Wok မီးတောက်ခေါက်ဆွဲ နဲ့ ဘူးသီးတောဓလေ့ထမင်းဆိုင်
By yin sandi On July 4, 2018 0
အို့အို… ? အခုတလော ဆိုင်သစ်တွေ ဆိုင်ခွဲသစ်တွေဖွင့်တာပဲများလွန်းနေလို့လား မင်မင်ရဲ့မဟာမျက်လုံးတော် စူးရှနေလို့လားတော့မသိ? Promotion တွေချည်းမြင်မြင်နေရတယ် ? Promotion ချထားတဲ့ဆိုင်တွေကလည်း နာမည်ကြီးပြီးသား လူကြိုက်များတဲ့ဆိုင်လေးဆိုတော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်လက်တို့လိုက်ဦးမယ်နော်? ဒီဆိုင်လေးကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာဟင်းချက်နည်းတွေအတိုင်းချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ တောဓလေ့လက်ရာလေးတွေကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ ” ဘူးသီး မြန်မာတောဓလေ့ထမင်းဆိုင် ” နဲ့ ခေါက်ဆွဲအသည်းစွဲတွေ နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြီးသား ” Mr.Wok မီးတောက်ခေါက်ဆွဲ ” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mr Wok ရဲ့ဆိုင်ခွဲအသစ်ကို ဘူးသီးဆိုင်နဲ့တစ်နေရာတည်းမှာ တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ Promotion လေးပါ ? ဇူလိုင်လ(၃)ရက်နေ့ကနေ (၈)ရက်နေ့အထိကို ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းတောင် ? လျော့ပေးနေတာပါ။ ခဲတောင့်ခဲရင်းရတဲ့ အခွင့်အရေးလေးမို့ လက်မလွတ်သွားစေဖို့ သတင်းကောင်းလေးပါပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဈေးနှုန်းတွေကလည်း လူအများစားသုံးနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အပြင် Promotion ပါထပ်ရမယ်ဆိုတော့ ဒီအချိန်မသွား ဘယ်အချိန်သွားမလဲနော် ? သွားစားဖို့စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် နေရာလေးကတော့ အမှတ်(၁၁၆/၁၁၈) ၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း ၊ မြေညီထပ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရိအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/buthee/mr.wok
အရသာအလန်းကြီးနဲ့ ယိုးဒယားစဉ့်အိုးကြက်ကင်အရသာ အိအိဆိမ့်ဆိမ့်လေးခံစားနိုင်မယ့်….